Maxaa talooyin SEO ah oo khubarada kuu soo jeedin kara bogga internetka?
Meesha goobta ah waa gargaarka ugu caansan ee loogu talagalay bogaggaaga, waxayna leedahay saameyn toos ah oo ku saabsan isticmaalka bogga iyo isticmaalka user-friendly. Maaddaama dadka isticmaala waayo aragnimo leh shabakadda websaydhku waxay qaadataa Google oo ah darajo sarreeya, waxaad u baahan tahay inaad ka qayb qaadato qaabkan oo ah qaabeynta bogga. Sidaa darteed, haddii aad isweydiinayso sababta boggaagu u shaqeyn waayo si fiican, waa wakhti aad ku qaadato fiirin adag oo ku saabsan noocyada navigation ee aad leedahay. Haddii goobtaadu u muuqato mid soo jiidasho leh, macnaheedu maaha inay sahlan tahay in la raaco. Haddii booqdayaashaada iyo macaamiishu ay dhici karto inaysan ka heli karin shabakada internetka ama alaabooyin gaar ah oo ay raadinayaan, waxaad u baahan tahay inaad siiso dib u habeyn ama fududeyso boggaaga navigation. Waxay kaa caawineysaa inaad hagaajiso heerka aad u kacday oo aad kor u qaaddo isbedelka - web hosting vps. Iyadoo aan lahayn habka navigation navigation, website-kaaga SEO wuxuu noqon karaa mid aan faa'iido lahayn. Waxaad halis u tahay in aad isku kalsoonaato macaamiishaada suurtagalka ah oo aad u wareejisaan ilahaaga internetka. Tilmaamaha gaaban, waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah talooyin waxtar leh sida loo abuuro bogga ugu fiican ee bogga navigation iyo horumarinta boggaaga SEO. Hagaajinta shabakada SEO
Ha ku dhaafin menu
) Waxaa lagu qiyaasaa malaha in website ay tahay inuu lahaado kaliya hal raashin. Dhammaan shabakadaha casriga ah waa in ay leeyihiin shabakado yaryar oo yaryar oo ku yaal bararka sare ee bogga internetka. Xidhiidhyadani waa inay muujiyaan qaab dhismeedka goobta waxayna u suurtagelisaa dadka isticmaala inay markiiba helaan waxa ay u baahan yihiin. Xaaladaha intooda badan, ilaha websaydhada e-commerce waxay leeyihiin laba maqaayadood oo kala duwan. Qaybta koowaad waxay inta badan ku xiran tahay bogagga bogagga iyo qaybaha, halka barbaro kale oo ku jira bogagga dibedda sida warbaahinada warbaahinta bulshada ama waraaqaha warsidaha. Waxaan kula talinayaa inaad iska ilaaliso wax walba oo ku jira hal menu. Haddii kale, mulkiilahaaga ugu muhiimsan wuxuu yeelan doonaa muuqaal xun oo ah qaabdhismeedkaaga. Markaad abuureyso boggaaga navigation navigation, waa inaad diirada saartaa macluumaadka ugu muhiimsan ee muhiimka ah iyo sidoo kale ujeedooyinka ganacsigaaga. Tusaale ahaan, haddii aad jeclaan lahayd in macaamiishaada ay kula soo xiriiraan e-mail ama lambarka taleefanka, waxaad ku dhejisaa xiriirka "Contact" ee cinwaanka goobta.
Si aad u hagaajisid boggaaga SEO, waxaad u baahan tahay inaad doorato badhano noqonaya kuwa ugu faa'iido badan macaamiisha mustaqbalka. Si aad u dooratid badhanka ugu haboon, waxaad u baahan tahay inaad sameyso baaritaan, qashin ku sameyso falanqaynta website-kaaga oo raadi boggaga ku jira baahida ugu sareysa isticmaalaha.Hubi inaad ka mid tahay "Taageerada Macaamiisha," "Dalbashada hal guji," "Abaalmarin," "Portfolio" iwm. waxaa lagu dhejiyaa barta internetka ee bogga ugu muhiimsan. Meelaha khaldan ee badhanka ah ee badhankani waxay khatar ku noqon karaan ganacsigaada oo aad kor u qaadaan heerka sare u qaadida. Si aad u hubiso in aad u soo jiidatid dadka isticmaala badhanka saxda ah, waxaad u baahan tahay inaad dib u eegto caannimada dhamaan waxyaabaha aad ka midka yihiin navigada adiga oo adeegsanaya kuleylka.